DEG DEG: M/weynaha Soomaali Galbeed oo ku dhawaaqay war cusub, farxadna galiyey Shacabka. – Puntlandtimes
DEG DEG: M/weynaha Soomaali Galbeed oo ku dhawaaqay war cusub, farxadna galiyey Shacabka.
JIGJIGA(P-TIMES)- Madaxwaynaha Ismaamulka Soomaali State Mustafe Muxumed Cumar ayaa maanta ku soo laabtay Caasimada Degaanka Soomaalida ee Jigjiga, ayaa qabtay Shir Jaraa’id oo uu kaga hadlay arrimo fara badan oo ku aadan xaakadaha Degaanka, Dalka iyo gobolka Geeska Afrika.
Madaxwaynuhu wuxuu carabka ku dhuftay in socdaalkiisii u ku tagay cariga Ereteriya oo uu kaga qayb galay shirkii wada hadalka ee u dhexeeyay ururka Xoriyad u dirirka ee JWXO iyo Dalka Itoobiya.
Wuxuu madaxwaynuhu aad ugu dheeraaday sidii la isugu soo ururin lahaa halgamadii kala duwanaa ee shacabka DDS soo galeen ee xaqooda ugu dirirayeen.
Wuxuu madaxwaynuhu tibaaxay in la xusi doono dadkii u shahiiday halganadii xoriyad u dirirka.
Dhanka saraynta sharciga wuxuu madaxwaynuhu sheegay in balanqaadkii is cafinta iyo midaynta ay jiraan dad ku taamaya in ay dulmigii ay sii wadeen ay iyagoo ku gabanaya xoriyada ay carqaladaad sii wadaan iminka aan u soo jeedsan doono.
Anagu dulmigii in la saxo way naga go’an tahay xafiisyada dawlada oo idilna waxaa la amray inay dabagal ku sameeyaan hantidii la lunsaday iyo lacagihii la boobay oo ay dad badani ka qayb qaateen taasiba si sharci ah ayaa loo mari iyadoon shaqsi la beegsanayn, xafiisyada baadhista ee DDS waxay bilaabeen sidii baadhitaan sharci loo samayn lahaa.
Taasna in dulqaad la yeesho cidii hantida shacabka dhacday ee fawdada abuuraysana talaabo ayaa laga qaadi.
Dhanka qabyaakada, waxaa uu madaxwaynuhu sheegay in dad fikir xagjirnimo oo qabyaaladeed aaminsan ay jiraan balse maanta shacabku way baraarugeen oo dawladnimada iyo reernimada la kala garto.
Wuxuu madaxwaynuhu sheegay in marka representationka qabyaalada aan xukuumada ku qaybsano inayna macbaheedu ahayn reer hebel ayaa xafiiskaa leh.
Wuxuu Madaxwanuhu carabka ku dhuftay in ay jiraan dad aan kala garanayn shaqooyinka ay xisbigu iyo xukuunadau kala leeyihiin iyo shaqqooyinka federaalka iyo deegaanku kala leeyihiin. Waxuu uu sheegay in dadka qaarkii ay ku ilbaxeen inay arkaan hal nin oo kaligii talis ah uu wax walba qabto. Balse anagu waan badalnay oo cid walba shaqadiisa ayuu qabsan oo aanan lagu fara galinayn.
Madaxwaynaha oo ka hadlay dhanka khayraadka dabiiciga wuxuu sheegay in qaybsiga khayraadka ay ka taagan yihiin fikirka uu shacabku qabo.
Dhanka kale wuxuu sheegay inuuna jirinaynin qof dacaayad wax ku hela, anagu uma joogno inaan shaqsi difaacno ma aha ayuu madaxwanuhu sheegay.
Madaxwaynuhu wuxuu shacabka ku booriyay in laga wada qayb qaato dhisida ee uuna rabin in shaqaalaha dawlada iyo masuulyiintoodaba uu ka sugayo inuuna isaga amaanine ay shacabkooda u adeegaan.
WARIYE: Saacidiin Axmed Yusuf
Adiguba waxaad la baxday puntland maxaad ugu diideysaa magaca ogaadeenya ee soo jireenka ah waa suaal daweynee dalka yaa iska leh waddaniga dagaalama oo dhiiga u daadshaa leh hadaad magaca ogaadeenya diidantahay maxaad dhiigaada ugu huri weyday mise xamar intaad makrafoon qaadato ayaad oranaysaa sida xaad beesha hawiye samigeedii lama siinin. waa dhab gobolku waa dhul somaliyeed laakiin markaad la timaadaan 4.5 kii koonfurta dhulku wuxuu noqonayaa dhul ogaadeen. somalinimada ayaa dadka deeqdaa taa meelna ha dhaafin hadaad u dhaafto cudurkiina unbaa sii weynaan. dalkii ka quruxsanaa meel kastoo adduunka ah kana barwaaqo sanaa ayaad waxba ka qaban weydeen maxaad mid kale ka galbeedsani.